နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: အဆင်သင့်သုံး အစားထိုးစရာ photoshop psd ဖိုင်များ
အဆင်သင့်သုံး အစားထိုးစရာ photoshop psd ဖိုင်များ
ကဲ ဒါကတော့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာနှင့် ခေါင်းကို အစားထိုးလိုက်ရုံပါပဲ . အဆင်သင့်လုပ်ထားတဲ့ ကုတ်အိကျီပါ . ကျွန်တော့် မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်က ကျွန်တော့်ညီ ဖြိုးယံလေး တင်ပေးထားတာကို ပြန်ပြီးတော့ share ပြန်ခွဲပေးတာပါ . အောက်မှာ ပုံစံလေးတွေနဲ့ ပြထားပါတယ် . အဆင်ပြေသလိုသာ Download လုပ်ကြပါ . ပုံတွေက နဲနဲများတော့ စာသိပ်မရေးတော့ဘူး မဟုတ်ရင် ရှည်သွားမယ် . ကိုလိုချင်တဲ့ ပုံကို လိုက်ကြည့်ပြီး ကြိုက်တာနဲ့ သူ့ဘေးကရှိတဲ့ Downlaod ကို နှိပ်လိုက်ပါ . ဒါကတော့ နယ်က ဓါတ်ပုံပြင်တဲ့ ညီအစ်ကိုများ ကုတ်အိကျီ အခက်အခဲရှိနေပြီး ကုတ်အိကျီနှင့် passport ပုံများ ထုတ်ချင်သူများအတွက်ပါ . Download လုပ်တဲ့သူများ ဖိုင်ဆိုက် အခက်အခဲဖြစ်မှာ စိုးလို့ ကျွန်တော် တစ်ပုံကို တစ်ဖိုင်စီ တင်ပေးထားပါတယ် .
Download Multiupload ၊ Download mediafire
Posted by Hajee Than Hla Oo at 4:37 AM